Ọchụchọ Gugul na SERP | Martech Zone
Ọchụchọ Gugul na SERP?
Fraịdee, June 27, 2008 Tọzdee, Nọvemba 22, 2012 Douglas Karr
Ezigbo enyi na onye gị na ya na-arụkọ ọrụ, Marty Nnụnụ, kwuru ihe a na-adọrọ mmasị m na-ahụbeghị na Google. Ike ịme nyocha saịtị n'ime nsonaazụ ọchụchọ n'ezie:
M na-eji saịtị Nchọgharị ọtụtụ ihe na Google. Nkọwapụta ahụ dị mfe ma ọ na-adịkarị ngwa ngwa karịa iji usoro nyocha nke saịtị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọọ na saịtị m, dịka ọmụmaatụ, na ndụmọdụ maka ederede Indianapolis, syntax ahụ bụ saịtị: martech.zone Indianapolis.
Na nyocha Ọwa mgbasa ozi, ọ pụtaghị na ha na-eji Google maka nyocha ha n'ime - ya mere enwere m ọchịchọ ịmata ihe kpatara usoro ga-apụta na SERP?
Tags: nyocha googlenyocha saịtị googlegoogle +nyocha saịtịnyocha ọchụchọ
Ule Nduzi na Telecommuting
Mgbe Malls ghọrọ Datacenters…